Dagaal khasaaro naf iyo maalba leh oo markale dhexmaray Oromada iyo Soomaalida -
Dagaal khasaaro naf iyo maalba leh oo markale dhexmaray Oromada iyo Soomaalida
Dagaal u dhaxeeya Qoomiyadaha Soomaalida degta dalka Itoobiya iyo Qoomiyadda Oromada ayaa markale waxa uu ka bilowday deegaan kamid ah dhulka Soomaalida ay degto ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Dagaalkaas ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan 20 ruux oo labada dhinac ah sida laga soo xigtay Soomaalida halkaas degan qaarkood.
Dhaawaca labada dhinac ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu aad ufarabadan yahay dagaalka oo xoogaysatay Awgeed.
Qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa u dhaxeeya muran dhanka sohdinta labada qowmiyadood ay degan yihiin, gaar ahaan deegaanada ismaamulka labada dhinac.
Afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sheegay in dad ka badan 100 qof ay ka soo xireen deegaanada Oromadu ay degto.
Mas’uuliyiinta labada dhinac ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo kuwa Oromada ayaa bishii April ee sanadkan gaaray heshiis lagu soo afjaro colaada u dhaxeysa labada dhinac balse hadda Markale uu soo laabtay Murankooda ku saleysan dhulka.
Dagaalada u dhaxeeya Qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa waxaa bishii September ee sanadkan ku barakacay tobanaan kun oo qoys, kaddib markii dagaalada ay ku sii fideen deegaano hor leh xiligaas.
Dowladda Itoobiya ayaa horay ciidamo Milateri u geysay deegaanada lagu muransan yahay ee xadka labada dhinac, si ay u kala dhex galaan, hase ahaatee illaa iyo hadda waxaa socda dagaalka labada dhinac u dhaxeeya.
Waxaana soo baxay khasaaraha labada dhinacba kala gaaraya.
Related Items:Dagaal Khasaaro naf iyo Maalba leh oo markale Dhexmaray Oromia iyo soomaalida Halkaas Degta, Featured
Shacabka ku nool Agagaarka Warshadda Barfuunka oo Xalay Walaac Muujiyay
Golaha Wasiirada Maamulka Hir-Shabeelle oo lagu dhawaaqay